माझखण्ड ‘हट केक’ हुँदै [तस्विर सहित]
फागुन २४, २०७५ बिगुल
तथ्याङ्कसहित भन्न त सकिएन तर जिल्लाभरिको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकस्तरको मापन गर्ने हो भने माझखण्ड सबैभन्दा पछाडि पर्ने कुरोमा दुई मत हुन्न । आजको यो अवस्थाको माझखण्डलाई हाराहारीमा ल्याउन कति पापड बेल्नु पर्ला ? अझ जिल्लाकै ‘हट केक’को रुपमा प्रकाशित गर्न केके कदम चाल्नु पर्ला ? हो, अहिले यही ‘हट केक’ बनाउने कदम सुरु भएको छ र त माझखण्ड चर्चामा छ ! आर्थिक समृद्धिको पहिलो प्राथमिकता पर्यटन उद्योग हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा पनि अब दुईमत रहेन ।
माझखण्डलाई ‘हट केक’ बनाउने पनि पर्यटन उद्योगबाट नै हो भन्ने कुरोमा पनि अब दुविधा रहेन । माझखण्डलाई जिल्लाकै ‘हट केक’ बनाउन कसरी सकिन्छ त भन्ने बारेमा यहाँका आङा÷आले, नाना÷ज्योज्यो, आमा÷आबा सबै कम्मर कसेर लागेका छन् र, पर्यटकहरुलाई स्वागत÷सत्कार गर्न तम्तयार भएका छन् । मानसिक रुपमा तम्तयार हुनु र यसका हरेक कदम चाल्न तयार हुनु विकासका दृष्टिकोणले ज्यादै राम्रो मानिन्छ ।
प्राकृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पर्यापर्यटन, जैविक÷वानस्पतिक पर्यटन, तीक्ष्ण स्वादको ग्रामीण परिवेशको पर्यटनका प्रचुर सम्भावना भएकाले माझखण्डलाई ‘हट केक’ बनाउन सकिन्छ । यसका एकएक सम्भावनाालाई योजना र कार्यक्रमका खाकामा ढाल्ने र कार्यढाँचामा राख्ने कार्य पनि सुरु भएको छ । माझखण्ड पर्यटनको लाइफलाइन भनेकै कान्तिलोकपथ हो । यसले काठमाडौँ र हेटौँडालाई ८२÷८३ किमीको दुरीले जोड्दै छ । काठमाडौँबाट माझखण्ड पुग्न एक घण्टाको समय पनि लिँदैन । उता हेटौँडामात्रै होइन, वीरगञ्ज र जनकपुरसम्मका लागि एकैदिन रिफ्रेस हुन सहजै आउनेजाने गन्तव्य हुन्छ ।
काठमाडौँको उकुसमुकुसबाट स्वच्छन्दताको मज्जा लिन माझखण्ड उत्कृष्ट गन्तव्य हुन्छ । तराईको तातो छल्न र शीतलताको मज्जा लिन माझखण्ड नै रोज्जा हुन्छ । कान्तिलोकपथको भट्टेडाँडाको छपेलीखण्डबाट माझखण्ड जोड्ने २.८ किमी दुरीको अत्याधुनिक केबुलकार निर्माण हुँदै छ । माझखण्डलाई ‘हट केक’ बनाउने पहिलो काम यही केबुलकारले नै गर्दै छ । धेरै मान्छेको जिज्ञासा भनेको नै माझखण्डमा के छ ?
माझखण्ड झन्नै २ हजार मिटर उचाईमा रहेको रमणीय उच्चसमस्थली हो । यहाँबाट तराइको रक्सौलसम्म, हिमालय शृङ्खला, फराकिलो पहाडि भूभाग, यहाँभन्दा माथि रमिते लेक पुग्दा तराई, काठमाडौँ उपत्याका र सगरमाथासम्मको दृश्यावलोकन गर्न सकिने दुर्लभ स्थानसमेत यहीँ छ । रमिते आफैमा नेचुरल भ्यु टावर हो । प्रसिद्ध रुदे्रश्वर महादेवस्थान माझखण्डमै छ । महादेवको रौद्ररुपको एक मात्र मन्दिर बनाउन गत शिवरात्रीका दिन शिलन्यास गरिसकिएको छ । बसेरीको बाघभैरब, गौरीघाटको कुण्ड, गुफा, झरना, अग्नीशाला, पोखरीडाँडाको पोखरी
रुदे्रश्वरकै अंग भएको प्रस्ट भएको छ ।
माझखण्डको रुदे्रश्वर र गोटिखेलको कालेश्वरलाई जोड्न शैव पदमार्ग निर्माण गर्ने सोच अघि बढेको छ । त्यस्तै यहाँ शिक्षादीक्षासहितको गुम्बा निर्माण गर्ने कार्यलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । बौद्ध गुरु लामा र खेन्पोले स्थलगत अध्ययन गरिसक्नु भएको छ । झन्नै २० वर्षअघि देखि बन्दै आएको माझखण्ड बुद्ध विहारले धामको रुप धारण गरिसकेको छ ।
अझ बौद्ध दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान, ध्यान र जपतप गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकृष्ट गर्ने केन्द्र बनाउन कसरत भइरहेको छ । त्यसो हुँदा माझखण्ड पूर्वीय दर्शनको पवित्र पुन्य धामका रुपमा विकास गर्ने मिशनको थालनी भएको छ । यसका लागि त्यहाँ आउने पाहुनाहरुका लागि होमस्टे, कटेज, रेष्टुरेन्ट, होटेल, अम्युजमेन्ट पार्क बन्ने क्रम पनि सँगसँगै हुँदै छ । वागमती गाउँपालिकाको त पहिलो प्राथमिकतामा परिसकेको छ साथै प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण पनि भइसकेको छ ।
स्थानीय समुदायले माझखण्ड पर्यटन विकास समिति गठन गरिसकेका छन् । लगानीकर्ता र वित्तीय संस्थासँगको समन्वय र साझेदारी गर्ने कार्य डेष्टिनेशन माझखण्ड प्रा.लि.ले गरिरहेको छ । निजी, सरकारी र समुदाय मिलेर समृद्ध माझखण्ड बनाउने र जिल्लाको ‘हट केक’को रुपमा विकास गर्ने अभियानले सार्थकता पाउँदै छ ।
सञ्जेल डेष्टिनेशन माझखण्ड प्रा.लि.का अध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : शुक्रबार, फागुन २४, २०७५१६:५५